Yaman keessatti Baqattooti Oromoo Dhumaa Jiru. – OROMOCENTRE
December 4, 2013Home
You are here: Home / Uncategorized / Yaman keessatti Baqattooti Oromoo Dhumaa Jiru.Yaman keessatti Baqattooti Oromoo Dhumaa Jiru. July 10, 2012 by oromocentre Leave a Comment (Oromocentre, 10 Adoolessa 2012) Baqattoota Oromoo biyya abbaa isaanii irraa dhiibamanii biyya yaman keessatti dahatan irratti hiraarsaa fi ajjeechaan gahaa jiru daran hammaachuun gabaasame.
Maddi Oduu keenyaa Yaman irraa odeessa nuuf ergeen akka hubachiisetti, miidhaa fi hiraarsaan Oromoota irra gahaa jiru yeroo irraa gara yerootti hammaachaa jira.
Odeeffannoon suuraa waliin qindeeffamee nuuf ergame irraa akka hubachuun danda’ametti, lubbuu namoota 12 olii Yaman keessatti darbee jira.
Kana malees, manneen hidhaa addaddaa keessatti namooti hedduu hiraarfamaa akka jiran, yeroo ammaa kanattis daa’immanii fi dubartooti hedduu akka malee miidhamaa jiran.
“Akkuma ammaan dura iyyachaa turretti rakkinni Baqattoota Oromoo irra gahaa jiru daran ammas kan ija baasee itti fufeedha,” kan jedhan baqattooti Oromoo, hawaasti Oromoo biyya addaddaa keessa jiraatu karaa danda’uun sagalee isaanii akka ta’an, waan danda’aniinis akka birmata iif waamicha godhanii jiru.
Bal’ina Gabaasa kanaaf hidhaa kana banadhaa:Gochaan suukanneessaan Baqattoota Oromoo Yaman irratti raawwatamaa jiru itti fufaa jira_0 (1)
Filed Under: Uncategorized « All Are Invited to Bilisummaa-Fest in OromiaSERMOCVA Monthly meeting »	Leave a Reply Cancel reply